Smaragd na-acha odo odo: nlele nke ọdịda anyanwụ thuja, ihe ọkụkụ, nlekọta na ịkọ ubi - Osisi - 2020
Thuja Golden Smaragd - nkọwa
A na-akụ arborvitae na-achọ mma n'ụlọ ezumike n'oge okpomọkụ nke na ọ ga-adị ha mma n'agbanyeghị oge. Otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu ma na-akọwaghị bụ thuja Golden Smaragd. Varietydị a nwere ọdịdị mara mma, uto na-adịghị ala, obere nha na ịkọwa ya na nlekọta.
Thuja Golden Smaragd Golden (Golden Smaragd)
Thuja Golden Smaragd bụ osisi ịchọ mma nke nwere mkpụrụ osisi echekwara, yabụ amachibidoro omumu ya n'enweghị ikike pụrụ iche. Ndị ọrụ ugbo na ndị na-ahụ maka ogige na onye na-ahụ maka ya na-ahụ maka echiche a na-ahụ maka ụzọ ụzọ, mepụta ogige, na iji kewaa saịtị n'ime akụkụ.
Thuja dị ndụ nsu Golden Smaragd
Maka ozi! A na-ewere ala nna nke Thuja Smaragd dị ka ọlaedo America na Canada. Ọ bụ n’ókè mba abụọ a ka ebu ụzọ chọpụta osisi a ịchọ mma. Na Russia, na nke mbụ, otu osisi pụtara n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Ojii.
Nkọwapụta na nkọwapụta
A na-akpọ osisi kụrụ akwụkwọ ndụ ochie nke nwere okpueze drọma dị warara na warara nke isi ọla edo bụ thuja Golden Smaragd. Agịga osisi a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Okenye thuja toro na elu site na 4 ruo 6, okpueze okpueze ruru mita 2. Nle anya ndụ dị ka afọ 130. N'ime otu afọ, thuja tolitere na elu ọ bụghị ihe karịrị 20 cm, na obosara site na 4-5 cm.
Thuja ọdịda anyanwụ Golden Smaragd bụ onye nnọchi anya ama ama nke ezinụlọ Cypress. A na-akpọ ahịhịa Crohn, yana mkpuchi na-acha okirikiri. N'ime afọ ahụ, osisi ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'oge opupu ihe ubi, oge mkpụrụ osisi na-amalite, mgbe oge ifere ji agba aja aja na-apụta n'osisi ahụ, ha na-amalite ịda site na mmalite nke ụbịa oyi.
Jiri na nhazi odida obodo
Thuja Golden Globe (Golden Globe) - nkọwa
Ebe thuja ọdịda anyanwụ Golden Smaragd nwere ọdịdị dị ala ma doo anya, a na-ejikarị ahịhịa a iji mepụta ogige n'ogige ntụrụndụ na n'ámá. Osisi a kụrụ n'akụkụ ibe ya nwere ike dochie ogige ọ bụla. Ilekọta ụdị ahụ agaghị akpata nsogbu. O zuru ezu iji mepụta ntutu ntutu n'usoro. Osisi ahụ mara mma ma na nchịkọta ma otu.
Attentionaa ntị! Ngere ghara idi ya nma ma oburu n’enweghi mkpachapu anya. Na nke a, na ntụle, ọ na-enweta ọmarịcha iche na mmetụ nke anụ ọhịa.
Thuya Smaragd na imewe odida obodo
Ọdịda na nlekọta
Iji kere osisi ornamental mara mma ma sie ike, ọ dị gị mkpa ibu ọrụ maka ihe ọkụkụ. Ọ dị mkpa na-edebe nuances nile, ebe ọ bụ na obere obere ihe atọ nwere ike imetụta mmepe nke osisi ahụ.
Etu ị ga-esi họrọ ndagide mgbe ọdịda
Rosa ọla edo - Ndị na-acha odo odo
Tupu akuku thuja, a na-ahọrọ seedling n'ụzọ ziri ezi. Ekwesịrị ịnye ụdị ntanetị gbanyere mkpọrọgwụ, nke enweghị akara ọ bụla nke mmebi na ọrịa. A na-akụ ha na mbubreyo mmiri - n'oge ọkọchị. N'oge mgbụsị akwụkwọ, a naghị atụ aro ka ịgha mkpụrụ osisi, ebe ọ bụ na ntu oyi nwere ike imetụta usoro mgbọrọgwụ.
Nhọrọ saịtị na nkwadebe ala
Ọ dị mkpa ịhọrọ saịtị kwesịrị ekwesị maka ọdịda. Adabara adabaghị na mpaghara zọpụtara thuja nwere ìhè anyanwụ, nke ga-adakwasị osisi mgbe niile. Ha nwere ike ibute oku ma mekwaa mmiri mmiri. A na-ewere ebe kachasị mma maka itolite ụdị dịgasị iche iche dị ka ebe ọkụ na nchedo dị elu na nchebe site na ifufe.
Attentionaa ntị! Banyere ala, ndị ọkachamara na-atụ aro ịkọ ụdị thuja a n'ime ala, dabere na nhọrọ onwe onye. Omume na-egosi na ala ọ bụla ịchọ mma kwesịrị ekwesị maka osisi a na-achọ mma, mana ala nwere ala na-adịghị ọcha na mmeghachi omume na-anọpụ iche ka a ga-ewere ka ọ kachasị mma.
Njirimara nke akuku na igba nkpuru nke osisi
Ọ dị oke mkpa bụ ịmị mkpụrụ kwesịrị ekwesị. Iji mee ihe niile nke ọma, ị ga-emerịrị ihe ndị a:
dozie osisi nke mere na mgbọrọgwụ n'olu dị n'elu ala larịị;
Nke mbụ ị ga - ewepu ite ahụ na mgbọrọgwụ osisi, wee tinye osisi ahụ n’olulu, jupụta ya na ala na mmiri;
mgbe emechara ihe niile, ịkwesịrị ịgwakọta ala, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbakwunyekwuo ụwa.
Mgbe ịghachara, ọ dị mkpa ịgbara osisi ahụ nke ọma, dabere na oge nke afọ.
Kụrụ ma lekọta nke thuja Golden Smaragd
Thuja na-elekọta n'oge ọkọchị
A na-ahụ Thuya Smaragd Gold dịka osisi na-enweghị nkọwa, yabụ na ọ gaghị esiri ike ịkụnye ya na ịkọ ya. Iji mee nke a, ọ dị mkpa iji nye ya nlekọta oge niile.
Dị Mkpa! Osisi ahụ bụ hygrophilous, yabụ, iji wee kpube okpueze na okpueze na-enwu gbaa, ọ dị mkpa ịnye ya mmiri na ịgba ya mgbe niile. Ọ bụrụ na mmiri esila n’elu ụwa dị nso n’ebe a kụrụ akụ, ọ ga-ezuru ya mmiri otu izu n’izu.
Ọ bụ n'usoro dị mkpa iji atọghe ala, wepụ ahịhịa. O kwesiri iburu n’uche na n’ime udiri a dịgasị iche iche dị nso n’elu elu, yabụ ị ga-akpachara anya.
Iji mepụta okpueze, a chọrọ usoro ntinye akwụkwọ na idobe ọcha. Tupu mmalite nke ihu igwe oyi, a ga-efesa okporo ọka na thuja rhizome na peat, agịga, ma ọ bụ ahịhịa kpọrọ nkụ. Nke a dị mkpa karịsịa maka ụmụ agbọghọ na-eto eto.
Ngwa fatịlaịza izizi na-arụ n’oge a na-akụ ihe. Oge nke abụọ dị elu akwa akwa a rụrụ n'ime ọnwa isii. N’ọdịnihu, a na-akpụkọta osisi okenye ihe karịrị otu ugbo n’afọ. A na-atụle oge kachasị mma maka nke a. Icdị oge a zuru itolite osisi mara mma.
Ngosiputa oge oyi maka thuja Golden Smaragd
Iji thuja tara ahụhụ oyi, ọ ga-adị njikere. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka Siberia na Ural, ebe ndị oyi na-atụ n'oge oyi. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchekwa osisi maka oge oyi.
Okwesiri ilekọta okpomoku nke ikpo oku, n'ihi na nke a ga - enyere aka chebe osisi site na ntu oyi na ọnwụ.
Na-egwuri egwu thuja Golden Smaragd
Osisi ahụ ga-abụrịrị mkpụrụ osisi. Mana ebe ọ na-ejide ọdịdị ya zuru oke ogologo oge, ọ gaghị adị mkpa ime nke a oge ụfọdụ.
Ndị nwere ahụmahụ n’ubi na-akwado ịbelata afọ abụọ ọ bụla. A na-eme nke a nke ọma n'oge opupu ihe ubi. Iji kwachaa ya, jiri ihe dị nkọ, nke na-eme ka ihe ọkụkụ dị mkpụmkpụ belata site na 1/3.
Attentionaa ntị! Tupu ịmalite ịkụda thuja, ịkwesịrị iji ọgwụ na-ehicha ya.
Olee otú Thuja Golden Smaragd si agbasa
Thuja smaragd - nkọwa na nha, ọdịda na nlekọta
Enwere ike mepụta omumu nke thuja Golden Smaragd n'ụzọ ndị a:
mkpụrụ. A na-ewepụta ya site na cones na ọkara nke abụọ nke Septemba, wee rute ebe ahụ ozugbo ma ọ bụ na Febụwarị na arịa pụrụ iche zubere maka mkpụrụ;
ibe. A na-eji ome nke afọ gara aga maka owuwe ihe ubi. 5 cm azụ, wee bido obere opekata mpe 15 cm. A na-ewepụpụ agịga ahụ n'okpuru.
Nke ọ bụla n’ime ụzọ ndị a nwere uru na ọghọm ya. Mgbe ị na-ahọrọ, ọ bara uru ịtụle mmasị gị.
Nsogbu ndi puru omume na etolite bulugd Golden Smaragd
Ebe ọ bụ na thuja Smaragd Gold bụ osisi ịchọ mma, ọ na-ekpughekarị mmetụta ọjọọ nke ụmụ ahụhụ na ọrịa. Ndị kasị dị ize ndụ bụ:
ihe ahụ o kwuru bụ ụgha. Ejiri mara ya nke uto na-adị ka cones. Ọgwụ ụmụ ahụhụ na-egbu egbu dị mma maka ịchịkwa nje ndị ọzọ;
ero. Agịga na-amalite ime ka odo, agba aja aja na-apụta na Ome. Iji lụsoo ọrịa ahụ ọgụ, ịkwesịrị igbutu ma kpọọ ọkụ nke ọrịa;
aphids thuja. A na-emetụta Ome na agịga. A na-agwọ ọrịa nke ahịhịa.
Thuja Western Golden Smaragd
Onweghi otutu oria di iche-iche n’ime nkpuru nke thuja a, ya mere odi nkpa inyocha onodu osisi ahu ma, oburu na odi nkpa, mee ihe ozugbo.
Thuya Smaragd Gold, nkọwa, njirimara na nyocha nke ndị na-elekọta ubi na-egosi na nke a bụ osisi mara mma na nke dịgasị iche. O nwere ike itolite n’elu ala o bula ma o choghi nlekọta di ya nkpa ma di nkpa Site na ya, ị nwere ike ịkọ ahịhịa ndụ ma nye ubi gị ihe pụrụ iche, n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe nke mpaghara ahụ.
Kasị mma ụlọ nduku iche Blue: foto, nkọwa, àgwà
Ihe ọ bụla gbasara ịkụ na ilekọta Wisteria Chinese: foto na nkọwa zuru ezu
Àgwà na atụmatụ nke na-eto eto tomato "Gina" na saịtị ahụ
Atụmatụ ndị na-elekọta ubi: enwere m ike kụrụ tomato na akwụkwọ na otu griin ha, na otu esi enweta ezigbo owuwe ihe ubi?
Dukes (cherry cherry): gịnị ka ọ bụ na nkọwa nke iche iche cherry Duke Miracle cherry
Hydrangea na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ - ịkụ na ilekọta ya na mbara ala
Ị nwere ike ime ka onwe gị na-acha uhie uhie n'ụlọ ma olee uru ọ bara? Akwukwo akwukwo nri, akwukwo nri
Ọrịa Aloe: ihe kpatara ọrịa na nhọrọ ọgwụgwọ ha
Clerodendrum: na-etolite ma na-elekọta ụlọ
5 ngwakọ nke apụl m kụrụ n’afọ a n’enweghị oge ọ bụla
Kedu oge kacha mma iji nweta birch sap